Blender 2.76b: Kana zvasvika kune 3D | Kubva kuLinux
Blender 2.76b: Kana zvasvika kune 3D
linuxero | | Applications, GNU / Linux
Blender 2.76b ndiyo yazvino vhezheni yakagadzikana yeiyo Blender Nheyo uye zvaive Yakaburitswa munaNovember 03, 2015
Blender muenzaniso wekuti chikumbiro chakaburitswa nekuda kwekushambadzira chinopedzisira chaguma mukushandisa yemahara uye yakavhurwa sosi. Kukundikana kwekutengesa kweBlender kwakaita mutungamiri wekambani yaive kuseri kweiyi 3D modeler, gadzira iyo Blender Nheyo kuenderera mberi nekuvandudzwa kwayo, asi panguva ino pasi peiri rezinesi reGPL. Tinogona kutaura panguva ino uye pasina kupokana, kuti iyi vhezheni ye Blender Vhura Chitubu (uye kunyanya kuburitswa kwazvino), iri nani software kupfuura yeCommerce Blender. Maitiro ayo uye kuita kwakawanda zvinoita chishandiso ichi kupfuura kungoita 3D modeler.
Zvishandiso uye mwenje muBlender
Blender ine simba rakanyanya uye muchinjikwa-chikuva cheiyo 3D mifananidzo kuti kwemakore gumi neshanu uye panguva yese iyoyo, yakwanisa kuwedzera hunyanzvi hwayo nhanho nhanho uye ikava imwe yeiyo 15D grafiti yekugadzirisa zvirongwa zvine mamwe maturusi uye mikana pamusika. Iyi yazvino vhezheni yakaburitswa inouya nehukuru hwesimba maficha e kugadzirisa, kupa, 3D modelling, kuchangamuka uye kutamba, zvese izvi zvakasunganidzwa mune yakasarudzika-yakanyatsogadzirwa uye inoyevedza interface inokwikwidza hunyanzvi hwekuronga hwevamwe maturusi ehunyanzvi akadai seMaya kana 3D Max ine nharo huru. Kuti urwise aya ehunyanzvi software mapakeji, Blender yakakwanisa kugadzira yayo yega katalog ye makuru akavhura sosi maturusi iyo inovhara zvizere zvese zveiyo 3D modelling, mameseji, masking, kuumbiridza, kubiridzira, kuteedzera kamera, kudzoreredza zvidimbu, kugadzirisa vhidhiyo, utsi, miviri yakapfava, uye kunyangwe yakazara yakazara vhidhiyo mutambo injini, zvese kuita yako 2D uye 3D mapurojekiti.
Zvese izvi zvishandiso uye masevhisi akabatanidzwa mune inoenderana iyo inogona kushandurwa zvachose zvinoenderana nezvinodiwa kana kunyaradzwa kwevashandisi, aine akangwara mamiriro ezvinhu aripo munzvimbo dzese uye maviri ekugadzirisa mamodheru. Chinhu Chinhu uye Hora Mode. Rubatsiro naHotkey zvechokwadi rwanyatsoitwa, uye mushure menguva pfupi yekuishandisa, kunyangwe vasina ruzivo vashandisi vanogona kuwana muongororo wakanaka kwazvo wezvose zvinopihwa naBlender. Nhasi, Blender inokwezva mamwe emhando yepamusoro maartist pamusika uyezve vasingaverengeke vatsva kune nyika ye digital modelling, vese avo vanofarira kuwana zvakanakisa kubva kune iyi yakasarudzika yakakurumbira 3D modhi software iyo inokwikwidza neayo anozivikanwa kwazvo. uye zvakanyanya kudhura) vakwikwidzi.
Blender 2.76b GUI
Ini ndinokukoka iwe kuti uwane iwo akasiyana siyana maturusi anowanikwa muBlender, ayo anotsanangura chirongwa chakazara (kubva kungoenzanisira kusvika pakuteedzana kurongedza) inodzorwa neye mushandisi interface inochinjika uye inoenderana.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuwana kodhi yekodhi yeichi chishandiso chine simba. Kana iwe uchizoedza kushandisa kodhi kodhi, iwe unofanirwa kushandisa Git kuitarisa yazvino vhezheni.
Para gadza blenderndinofanira download pasuru chaiyo yeplatform yako. Iyo Windows vhezheni inouya neyekusarudzika yekuzvitsvaga-yekumisikidza kumisikidza, kune mamwe mashandiro masisitimu iwe unogona kungoti unzip iyo yakamanikidzwa faira kunzvimbo yaunosarudza.
Chero bedzi Blender binary iri mune yekutanga yakatorwa dhairekitori, Blender inomhanya yakananga kunze kwebhokisi. Iko hakuna system raibhurari kana sisitimu inodiwa kuti ichinjwe, saka hapana chekufunganya nezvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Blender 2.76b: Kana zvasvika kune 3D
Zvinonzwisa tsitsi kuti ini handina zano rekushandisa blender kana mamwe akafanana zvirongwa.
Alexander TorMar akadaro
Isu tatova vaviri
MUTAMBI WOKUTYA akadaro
Kunyangwe paine mamwe mashandiro muiyo interface ichawedzera. Zvakanyatsotsanangurwa uye zvakadzama, ndatenda.
Pindura HORROR GAME
Chinyorwa chakanaka, zvinosuwisa kuti hauna kuongorora kushandurwa kwendima dzekupedzisira.
Akatsamwa Artist akadaro
Sehunyanzvi 3D muimbi, ndinofanira kutaura kuti nepo Blender ichikubvumidza iwe kuti uite zvinhu zvinoshamisa, chirongwa ichi chine nzira refu yekufamba. Iyo "Blender ndeyevashandisi veBlender" huzivi hunodonha nehuremu hwayo, uye ndizvo ... kana Blender iri yevashandisi veBlender ... ndinovimba ma-retinas avo achawa kubva pakuishandisa zvakanyanya, nekuti hapana nyanzvi yehunyanzvi inozoshandisa iyo kana kukurudzira kushandisa iyo kunze kwekumanikidzwa.
Chikonzero Krita chakabudirira uye chawana mari kubva kuGIMP ndechekuti ivo vakaita izvo zvavaifanira kuita… chinongedzo icho vanhu vakajaira. Ini kana chero mumwe munhu haasi kuzodzidza chimiro chechirongwa senge Blender iri mumamiriro azvinoita. Iwe unokotamisa musoro wako neZBrush nekuti hapana imwe sarudzo, asi Blender haizombokwanisa kukunda kunyangwe maSME kudzamara iyo interface yashanduka kuita zviyero zveindasitiri.
Chikonzero nei Maya LT uye Indie Mode ari iwo marongero ezuva iri nekuti kekutanga munhoroondo, software inosvikika yakapihwa maSMEs, software iyo inorova Blender zvachose nekuti hazvina basa kana nyanzvi yave ichishandisa software yese .3 XNUMXD Max hupenyu, kana kana wanga uchishandisa XSI hupenyu hwako hwese, kana chero chirongwa ... unogona kuchinjika nyore kuenda kuMaya LT uye Indie Mode nekuti vane uzivi hwakajairika kana zvasvika pakushanda, hapana chekuita neBlender. kuti, seGIMP, vanoenda kunopokana nemunhu wese uye vanotarisira kuti vatevere.
Pindura kune Akatsamwa Artist
Adal Romero akadaro
Ini HANDISI newe, maratidziro aunotaura akakosha mari, icho chinhu chimwe.
Kune rimwe divi, mhando yacho inodarika kukwana basa remhando yepamusoro, kushanda pariri.
Zvakare kukuudza kuti iri multiplatform, izvo zvaunotaura kwete.
Uye zvinhu zviviri zvakakosha zvakanyanya Blender ndeye mahara, yakavhurika.
Ndine chokwadi chekuti kana ndikanyorera kumhando dzakataurwa ndichiti ndinoshandisa maturusi avo havazonditenda nekushandisa kwavo, vanozokumbira rezinesi uye kana ndisina chichemo.
Nema blender vanozokutenda. "Usatarise mazino ake pabhiza rechipo."
Batsira chirongwa ichi kuenda kwaunoda.
Pindura Adal Romero
Blender yakanakisa software. Zano rekuti ivo vakawedzera kune iyo blog iyo pani iyo inoti Dzimwe Nhau dzinosvota pamwe chete nemasocial network kurudyi. Uye nekutenda nekudzosera bhatani kuti ukwire kumusoro.
Ivan Molina Rebolledo akadaro
Kwandiri bhatani rekudzoka rine chinzvimbo chisina kunaka. Zvinondipa matambudziko ne feedly (1920 × 1080).
Pindura kuna Ivan Molina Rebolledo
Nova, iyo GNU / Linux kugoverwa kwakaitwa muCuba
Pfungwa dzekushandisa yemahara software mune yako SME